Dhaqaalaynta cagaarka dalxiisyada n safarka | Nagala soo xiriir: 993.702.7574
Nabadgelyo aad ka timid Sandbawlsiyada Dalxiiska Turka N Travels - Hawlgalkan dalxiiska ee Odisha kaas oo taabanaya nuucyada macaamiisha leh baakidhka macdanta iyo adeegyo ku xiran. Sandbalka Tarbiyada Socdaalada N Safarka waxaa lagu sawiray 1993 oo ku yaal magaalada Bhubaneswar - caasimadda caanka ah ee la caanbaxay sida hudheelka dhaqanka dalxiiska iyo meel aad u xiiso leh oo ku yaal Odisha. Sandbalka Qalabka Cagaarka ah N Xafiisyada safarada waxay ku yaalaan hareeraha hareeraha waxayna leeyihiin hammaan raaxo leh.
Shirkada, sanadihii la soo dhaafay ayaa dhigay kubadda loo yaqaan "premium travel and company tour" oo ay soo saaraan shirkado safarro leh oo la yaab leh oo ay la socdaan xayeysiin cabsi leh oo ku saabsan munaasabadaha loo yaqaan 'Puri Special Tours, North East Tours, Boat Cruises, Goobaha Toddobaadka, Bhubaneswar Tours, Discover Mini Amazon - Bhitarkanika, Odisha Tour Spirituality, Chilika oo leh saddex xagalka Golden Otha, RathaYatra Package Special, Buddhist India Gateway to Odisha, Ilaalinta xeebaha Odisha, Tourist Tribal Exclusive, Sanctuaries ee Odisha .... in la xuso dhowr. Waxaa jira labada xirmood oo horay loo qorsheeyey iyo sidoo kale xirmo dalxiis oo loogu talagalay oo isku xira dhowr isku dhafan oo kala duwan si ay ugu faraxsanyihiin macaamiisha kuwaas oo ah Turki Turki Qabiil oo leh Temples, Buddhist Trail Odisha oo leh Bhubaneswar - Puri - Konark - iyo wax badan oo ka badan ... ..
Sanduuqa cagaaran ee dalxiiska ee dalxiisyada ee xayiraad adeegyo dheeri ah. Shirkadda ayaa sawir ka qaaday muuqaal nuug ah Adeegyada Guryaha Gaarka ah waxaana lagu qalabeeyaa gawaarida gaari-gacmeedyada casriga ah iyo macalimiinta. Sandbalka cagaaran ee caleemaha ayaa caleemo saaraya dhagax aan la shiideynin si uu macaamiishiisa ugu soo bandhigo raaxo farxad leh isla markaana u dhigo gabaygiisa oo dhan oo hadda ku jira warshadaha dalxiiska. Shirkaddu waxay ballaarisay joogitaankeeda laamaha laamiyada ee Puri, Gopalpur, Bhitarkanika, Delhi iyo Kolkata ee dadaalkooda si ay u gaaraan macaamiisha badan.
Sandbalka cagaaran ee safarka N Safarada waxaa aqoonsan Wasaaradda Dalxiiska, Govt. ee India oo ah hay'ad awood u leh in ay bixiso adeegyo tayo leh oo dalxiisayaal ah. Waxaa sidoo kale la aqoonsan yahay IATA. Shirkaddu waa xubin ka mid ah ururada ixtiraam leh sida IATO, UFTAA, ITTA, ADTOI, TAAI, ATOAI, FHRAI iyo TAAO.
Sandbirdhiga sanduuqa, oo ah hormuudka ganacsiga dalxiiska Odisha waxaa ka go'an inuu bixiyo adeegyo dalxiis oo gaar ah oo la xiriira macaamiishiisa, iyada oo la raacayo isbeddelka isbeddelka ee dalxiiska dalxiiska. Nidaamyada safarka iyo martigelinta ayaa si taxadar leh u fuliyay kooxda xiriirka iyo xeeldheer ee sandbalka Pebbles waxay u muuqdeen inay noqdaan kuwo qiimo leh, waqtigana marar badanna sawir ka qaadaya sawirka shirkadda. Horumarinta wax soo saarka iyo dhiirigelinta sheyga, shirkadu waxay ku socotaa miyir-beel leh farsamo tartan tartan ah. Kooxda khibraduhu waxay u arkaan inay yihiin, farshaxanka, iyo habka qaabdhismeedka shaqada; noocyo kala duwan oo dalxiis iyo waxqabadyo dalxiis oo macaamiisha u horseedaya. Kuwani waxay ka kooban yihiin deegaanka, dhaqanka, ruuxa, firaaqada, duurjoogta, iyo MICE, sidaas awgeedna u adeegta dhadhanka iyo rabitaanka macaamiisha kala duwan.
Odisha wuxuu soo saaraa dalxiis aad u badan oo dalxiis oo ka yimaada caalamka. Sandbalka Socdaalka Culaysku wuxuu ku yaryahay waxyaabo badan illaa toban sano iyo badh ay qabteen tiro badan oo dalxiisayaal ah waxayna bixiyaan safafka dalxiiska, kaalmada safarka, iyo taageerida dhaqaale. Wada-hadallada ganacsiga ee soo noqnoqonaya kuwaas oo ka kooban heshiisyo wax-ku-ool ah, nadaamyo la isku daray, iyo fursadaha neo-kicinta ayaa kor u qaadday joogitaanka sandbiyada Pebbles si weyn oo ah hogaamiye ganacsi oo ku yaala Bariga Hindiya. Mashruucan oo lagu ansixiyey shirkadda si loo xaqiijiyo kantaroolid tayo leh oo tayo leh iyo bixinta adeeg tayo sare leh ayaa soo jiidatay sharaf ka yimid meelo kala duwan.
Socodka caleenta cagaarka ah ayaa horay u sii socota iyada oo ruux aan la dabooli Karin. Quruxda Bariga Hindiya iyo Waqooyiga Bariga Hindiya wuxuu ku jiraa dabeecadaada, kaliya riixaaga barafka iyo boodhka dalxiiska ee Sandbope iyo Pebbles safarkiisa iyo kooxda khibradda leh ee aan si wanaagsan ugu faani karno si heer sare ah ayaa loo hubiyaa waayo-aragnimooyinka ku qanacsan.
Socodka sanduuqa cagaaran ee dalxiiska waxaa ku yaalla dambiilo xayawaan ah oo aad ka buuxsantay baakado aad u xiiso badan. Noqo Duurjoogta, Danta Gaarka ah, Rabshadaha, Xajka, Dhaqanka & Dhaqanka, Waqtiyada firaaqada, MICE .... waxaa jira afar iyo siddeed kaararka si loo kiciyo dareenkaaga. Xulashadaada waxaa si aad ah loo qiimeeyaa Sandbibsbiyada dalxiiska - ha noqoto Dal madaxbanaan oo madax bannaan ama koox-kooxeed oo la socdo ... waxaan leenahay heshiiska ugu fiican.
Muddadii sanadka, Safarka Dalxiiska Sandbooks wuxuu aasaasay joogitaankiisa ugu sarreeya sida adeega turjubaanka ugu sareeya ee shirkadda Odisha iyo adeegga kirada guryaha.
Iyada oo ay ugu wacan tahay adeegga baabuur iyo tababaro si wanaagsan loo qaabeeyey oo loogu talagalay wicitaanka wicitaanada - Sandbalka Pebbles wuxuu soo booqday wakhti go'an oo ah magaca qoyska oo wuxuu ku dhagan yahay dadka ku nool Odisha. Shirkadda Mercedes Benz, Skoda Superb, Honda Civic, Toyota Corolla, Honda City, Toyota Innova, Tata Indigo, Mahindra Logan, Mahindra Scorpio, Mahindra Bolero, Tata Indica , Tempo Travels, Mini-Vans iyo Coaches. Isku-duubka ayaa leh khibrad aad u wanaagsan oo leh raaxeyaal raaxo leh oo u raraya dharka shirkadda. Shirkaddu waxay diin ahaan u qaadataa jawaab celin macaamiisha ah oo ku saabsan waxqabadka darawalada iyo sidoo kale si joogta ah ugu xallinaya codsiyada dhaqanka. Darawallada waxaa la siiyaa taleefannada gacanta oo si joogto ah ula xiriiraya maamulayaasha.
Sanduuqa Qallalka ee Sandbuuciinka waxay kuxirmayaan qorshaha macaamiisha-saaxiibtinimo oo ay ka mid yihiin bixinta dhalada biyaha macdanta ah, wargeyska Ingiriisiga, jaleecada, waraaqaha unugyada, sanduuqa gargaarka degdegga ah iyo dalladda dhammaan baabuurta. Gawaarida oo dhan waxay ku xiran yihiin suumanka kuraasta iyo qalabka kale ee badbaadada iyo qalabka. Adeegyada Kirada iyo Tababaraha waxaa la siiyaa 24X7.
Isku-duwidda dalabka qaaliga ah ee dalxiisyada ka soo jeeda qul-qulqul-darrida ee ka soo jeeda miisaanka iyo dhirbaaxada ee la xidhiidha heysashada iyo dhaqdhaqaaqa nolosha magaalooyinka, Sandbibsbiyada dalxiiska ayaa abuuray guri dabiici ah oo ka jira Beerta Qaranka ee Bhitarkanika. Cunto-dhaqameedkan caqli-gal ah-boggling hoyga dheeraadka ah ayaa laga dhisay 'Jungle Resort'. Bhitarkanika waa meel qoyan oo ka mid ah kaymaha Mangrove oo la socda guryo qurxoon iyo guryo dabacsan, oo ku yaal degmada Kendrapara ee Odisha. Mid ka mid ah hannaanka mangrove ee ugu weyn ee mangrove ee Hindiya, Bhitarkanika wuxuu ku yaallaa flor iyo fauna kala duwan. Sanduuqa Qallalaha Cagaaran ee Jungle Resort ayaa loo qaabeeyey si ay u dhexgalaan dalxiisayaasha dareenka midnimada. Mashruucani wuxuu noqdey mid 'waa in uu ahaadaa booska' ee ku wajahan munaasabadda malabiyeyaasha. Sandbalka dalxiiska ee sanduuqa qallafsan ayaa sameeyay calaamad aan la aqoonsan oo ah wakiil ganacsi oo shirkad ganacsi ah. Ganacsiga MICE ee shirkadda waxaa loo heestaa sida 'mustaqbalka mustaqbalka'. Bandhigga caleenta cagaaran wuxuu keenaa ganacsi iyo waqti firaaqo aad u dhow. Odisha waa dalab dhab ah oo raali galin ah oo MICE iyo rukunka suuqa MICE ee xiiso leh, Dalxiiska Sandbawlsiyada Hubka ayaa diyaariyey qorshooyin manifold. Awoodda shabakada ee ugu fiican waxay u sahlaysaa Sandbugsiyada Dalxiiska in ay bixiyaan ama xayiraan qolalka hudheelka, calaamadee calaamadaha cilad-maskaxeed, iyo fududee madadaalada iyo madadaalada martida. Adeegyada dhabta ah ee dalxiiska Sandbirdoonka Cagaaran waxay ku xiran yihiin inay soo jiidaan ganacsiga dhacdooyinka soo noqnoqonaya.
Dhaqdhaqaaqa Cagaarka ee 'n' Entertainment Group, waax gaaban ee 'Tour Pebbles Tour' n 'Travels waxaa lagu aqoonsadaa Dalxiiska Hindiya, Govt. ee India iyo Wasaaradda Dalxiiska, Govt. ee Odisha. Garabkani wuxuu ku salaysan yahay magaalada caasimadda ah ee Odisha - Bhubaneswar. Maareynta waxqabadka waxaa lagu qabanayaa hawlgal dalxiis oo dheeri ah. Waxaa jira kor u kaca ganacsiga dhacdooyinka 'Odisha'. Safarka Sandbalka Cagaaran wuxuu ku faraxsan yahay inuu noqdo lammaanaha guusha ee ganacsiga maareynta dhacdada ee Gobolka. Sandbalka Socdaalka Culaysku wuxuu u dhexeeyaa dhererka sare ee kooxdiisu ayadoo leh xikmad iyo jilaa xirfad leh oo leh xakameyn firfircoon. Hadafka ugu wayn ee shirkaddu waa inay bixiso adeegyo gaar ah macaamiisheeda qadarin leh iyada oo diirada saaraya dadaallada ku salaysan qiimaha, macaamiisha.
Sandbalka Socdaalka Cagaaran waxay daabacayaan qoraallo badan oo wargelin iyo faahfaahsan iyo qoraallo kale oo xayeysiin ah oo muuqda mid aad u fiican. Baakadaha xiisaha gaarka ah ee sanduuqa cagaaran ee dalxiis ahaan waxay u dabbaalanayaan qowmiyadda qowmiyadaha ee Odisha. Waxay taageertaa hannaanka isboortiga ee qabaa'ilka iyo fursadaha u hartay dalxiisayaasha si ay u yeeshaan jaangooyooyin dhaqameed oo leh aqoonsi dhaqameed oo asal u ah asalka qabiil ee Odisha. Baakadaha dalxiis ee qabaa'ilka ee shirkaddu waxay soo bandhigeen dhadhanka gaarka ah ee dadka asaliga ah ee gobolka; dabeecadahooda iyo dhaqankooda. Dalxiisayaasha waxaa la siiyaa fursado balaadhan si ay u arkaan xafladaha midabada leh ee dabaaldega hababka nololeed ee khaaska ah ee keena ilaalinta dhaxalka kala duwan. Odisha ayaa dhibic u ah khariidadda qowmiyadeed ee Hindida ah ee haysta noocyada kala duwan ee beelaha qabaa'ilka. Inta badan qabiilooyinka waxaa laga helaa degmooyinka Koraput, Rayagada, Naurangpur, Malkangiri, Kalahandi, Kandhamal, Baudh, Keonjhar, Sundargarh iyo Mayurbhanj. Turka Qabiilka Qabriga ee Ceelwalba waxay ku yaallaan dhammaan meeshan oo waxay qabtaan xeeldheeraha sheekada iyo sawirrada jinsiyadaha asaliga ah. Wixii dalxiisayaal dhaqameedka ah, dalxiiska Sandbirdbiska wuxuu bixiyaa xirmo kulul. Dhamaan xafladaha waxay ku shaqeynayaan safarada caadiga ah ee shirkadda. Dalxiisayaashu waxay helaan fursado nololeed oo ay ku tagaan goobaha dhaqameed ee Odisha inta lagu jiro xilliyada xafladaha. Nabadgelyada iyo xasilloonida xafladaha ugu weyn ee dhaqanka sida "Festival International Beach Festival", iyo Konk Festival Festival fursadaha dalxiisayaasha si ay ula qabsadaan qurxinta qurxinta.
Odisha waxay leedahay meelo badan oo dalxiiso miyir la'aan ah. Marka laga reebo quruxda dareenka ah ee dalxiisayaasha safarka ah, dabeecadaha dalxiisku waa kuwa taariikhiga ah, sheekooyinka dhaqanka, calaamadaha diinta, iyo muhiimada qadiimiga ah. Baaxadda qarsoon ee dalxiiska miyiga ee Odisha ayaa xoojiyay xirmo khaas ah sanduuqa cagaaran ee dalxiiska. Shirkaddu waxay ku xirantahay muhiimadda ay leedahay horumarinta alaabooyinka dhaqameed ee asaliga ah ee meelaha miyiga ah sida Raghurajpur. Waxay ku baraarujisaa dalxiisayaasha dareenkooda ku aaddan hab nololeedka asaliga ah ee beelaha miyiga ah waxayna keenayaan jidadkooda. Dalxiisayaashu waxay raadinayaan 'isbahaysi' iyo 'sax ah' oo lala xiriiriyo dadka asaliga ah ee Odisha. Xirmooyinka sandbalka dalxiiska ee loo yaqaan 'Sand Pebbles Tour' waxaa loogu talagalay in lagu qaabeeyo Odisha iyo dalalka deriska ah sida Jharkhand, Madhya Pradesh, iyo Chhattisgarh oo ku yaalla xayndaabka tuulada ee dalalkaas oo muujinaya aragtiyo la taaban karo sida goobaha ceediska, beeraha, dabiicadaha kala duwan ee buuraha, kala duwanaanta guriga iyo migratory shimbiraha, dabbaaldegyada, gogoldhigyada .... iyo liistadu waa mid dhamaystiran.